Jo Nesbø uye chiremba wake Proctor. Mazhinji mafaro evana nevakuru. | Zvazvino Zvinyorwa
Jo Nesbø uye chiremba wake Proctor. Yakawanda yekunakidzwa kwevana nevakuru.
Mabhuku evana naJo Nesbø. Iyo Adventures yaDoctor Proctor.
Chipo chakakwana wevaMagi ve vana misikanzwa, inofungidzira uye nezvematongerwo enyika zvisirizvo pakati 9 uye makore gumi nemaviri. Nekuti Jo Nesbø, iyo Norse tenzi weiyo genre, nyorawo ivo. Uye anozviita aine imwecheteyo yekuseka, kuvhundutsa nekukochekera senge mumabhuku ake evakuru. Nyore kuverenga, izere nekufungidzira, rudo, kutya uye kushamisika, mwanakomana kurudziro yangu yekuzvininipisa yechipo chakasiyana chekuverenga uye chakanakira vana kubva pamakore mapfumbamwe kusvika pamakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe ekuberekwa.
Gore rino rinoratidzira yegumi yegumi kuburitswa kwemusoro wekutanga wenyaya dzakateedzana Chiremba chiremba. Asi pane atove mashanu, ichangoburwa uye yenguva chete yakaburitswa muNorway. Heano muparidzi wemabhuku evana Iyo gallery uyo akazvitsikisa muchiSpanish. Ivo zvakare vanochengetedza iyo inosemesa asi mienzaniso mikuru mavambo kubva kuchinyorwa cheNorway. Vazvizive. Vanozokushamisa.
Jo Nesbø akanyora zvinyorwa izvi rimwe zuva mwanasikana wake Selma akamubvunza kuti amuudze nyaya uko kwaive nemudzidzisi anopenga, mwana mudiki kwazvo (panguva iyoyo Selma, aine makore manomwe ekuberekwa, aitya vana), musikana akanaka uye anoshingaira uye dinosaur. Chinhu chedinosaur ndicho chega chinhu chainge chasiiwa.
Saka, iyo chiremba chiremba Ndicho akanaka wacky muvambi uye zvakare chaizvo akashinga y Amorous. Lise, Selma Nesbø's alter ego, ndiye musikana anoteerera uye anoshingaira. Ane muvakidzani Plug, mwana diki, tsvuku, yakashata, inoreva nhema asi inonakidza kwazvo, pamwe protagonist wechokwadi wenyaya dzese. A Miniature harry hole, pamwe chete nezvayo kusagadzikana kwezvematongerwo enyika, kugona kupinda mudambudziko y zvisarudzo zvisina kukodzera kusangana nematambudziko.
De Dr. Proctor uye iyo tirapedo powders.
Vatatu vavo vachave nemitambo yakasarudzika uye yakapenga sekugadzirwa kwehupfu hunogadzira mahombe mahombe, vanozofamba nenguva nekutenda kubhavhu remashiripiti, vachadzivirira kuparadzwa kwenyika uye ivo vachapedza humbavha hwakaomarara. Pasina tsika kana chinangwa chekuita zviripachena, kana iwe uchikwanisa kukoshesa iwo maitiro pane iyo ushamwari, the rudo kunyanya kudanana uye kuzvipira, iyo kushoropodzwa kwevanhu uye zvematongerwo enyika kana the simba rekufungidzira. Izvo zvakanyanya zvisina mamiriro emunyori zvichawanawo kugutsurira kumabasa ake evakuru uyezve ivo vanozoziva matauriro ake.
1 Chiremba Proctor Series
1.1 Dr. Proctor uye iyo tirapedo powders
1.2 Chiremba Proctor nebhati rekugezera renguva
1.3 Chiremba Proctor uye kupera kwenyika. Kana kwete.
1.4 Chiremba Proctor uye kuba kukuru
2 Sei uchiaverenga uye uchivapa
Chiremba Proctor Series
Dr. Proctor uye iyo tirapedo powders
Ivo vanotizivisa isu kune mavara, kumhuri dzavo, kwavanogara, chikoro chavo neshamwari. Isu tinoziva wacky Dr. Proctor, uyo anoda marefu ekuchengetedza uye nekugadzira ese marudzi ezvinhu ezvinhu. A Tapon, mukomana mudiki ane vhudzi dzvuku, akatamira nemhuri yake kuCalle de los Canñones, kunogara Lise. Uye izvo izvo vatatu vavo vanoronga kutarisana nazvo mapatya akaipa kubva kuchikoro kwaLise naTapon. Uye zvakare, kune zvakare kusununguka constrictor nyoka kuburikidza nemapaipi eguta reOslo, akakosha pakupera kwenyaya.
Chii chinoshamisa zvakare ndechekuti iyo munyori anopindira kakawanda kugadzirisa zvakananga kuvaverengi. Mashoko ake anonakidza achiri kuita zvinonakidza kuverenga.
Iri zita rekutanga yakashandurwa ku cinema in 2014.
Chiremba Proctor nebhati rekugezera renguva
Iri bhuku yakanyanya kuwanda. Pamusoro pekutambisa kwekufungidzira, tinotora rwendo kudzoka munguva iri nhoroondo yechidzidzo zvakasikwa. Ino nguva Dr. Proctor anonaya a rudo rwekare rwehudiki runonyangarika uye Lise uye Plug zvichakubatsira kuti uzviwane. Asi kutsvaga mudiwa akarasika ivo vanofanirwa kufamba kuburikidza nenguva vachishandisa bhavhu remashiripiti. Vachaonekwa parwendo rweFrance, vachasangana nemukadzi anotadza ane mbambo yegumbo uye skateboard, zvakare a Napoleon, mumwe Joan weArc, hondo, rufu uye pamusoro pesimba rese rerudo.
Chiremba Proctor uye kupera kwenyika. Kana kwete.
Zvichida iyo ine yakajeka kutsoropodzwa zvine hukasha kwehutongi hwehudzvanyiriri, tichivabatanidza nekusaziva kwetsika. Makwikwi emakwaya paterevhizheni hypnotize nyika yese uye vanhu vanotanga kuita zviperengo zvikanganiso. Mutungamiri wekwaya anodzinga Mambo weNorway uye anozviti mutungamiriri. Dr. Proctor, Lise naTapón vanofanirwa kuongorora kuti nei zvese izvi zvichiitika.
Chiremba Proctor uye kuba kukuru
The adventure kusviba yezvose. Mbavha dzine njodzi kwazvo dzinoba bhawa regoridhe chete mubhanga reNorway. Mambo vanobva varaira kuti nyaya iyi iongororwe. Nezve kupindira kwakabudirira kununura nyika, anozodaidza Dr. Proctor, Lise uye Plug. Saka, mushure mekuziva kuti makororo ari muEngland, vachaenda ku london. Ikoko ivo vanozobatanidzwa mune ese marudzi ezviitiko zvinozovatungamira kuti vabate nazvo munhu akapfuma kwazvo munyika, the nhabvu inodhura zvakanyanya pasirese uye nhabvu chirungu mukombe wekupedzisira.
Chiremba Proctor uye kuba kukuru.
Sei uchiaverenga uye uchivapa
Nokuti anoverengwa achifemerekaVakatora maawa mashoma kwandiri. Ivo chaizvo kupenga uye nekubata kweimba Nesbø nekuwedzeredza kwe a mutauro yevana nyowani sekumanikidza kwayo. Izvo hazvigadzirise kana kupomhodza pfungwa kana mamiriro ezvinhu. Asi pamusoro pezvose izvozvo ivo vanosetsa kwazvo. Nekudaro, kana iwe uchine kusahadzika nezvekuvapa ivo vana, ita chipo iwe pachako. Chaizvoizvo, usavasuwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Vechidiki Mabhuku » Jo Nesbø uye chiremba wake Proctor. Yakawanda yekunakidzwa kwevana nevakuru.
Vanhu havachataure nezvemabhuku futi
Wira murudo nemunhu anoverenga